Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Filibiin News » Tirada dadkii ku dhintay shilka diyaaradeed ee Filibiin ayaa gaartay 52 qof
Airport • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Filibiin News • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Diyaaradda militariga ayaa waxaa saarnaa shaqaale ciidan oo dhowaan la tababaray markii ay dhacday oo ay olol gashay ka dib markii ay ka gudubtay dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan abaarihii 11:30 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah Axaddii.
Laba qof oo kale oo ka badbaaday shil halis ah ayaa ku dhintay isbitaalka.
Hawlgallada dib u soo celinta ee qaybaha diyaaradaha, oo ay ku jiraan sanduuqa madow ee duubay xogta duulimaadka, ayaa ka socda goobta ay diyaaradda ku dhacday.
Baadhitaan buuxa oo ku saabsan shilka ayaa amar lagu bixiyey isla marka hawlgalka samatabbixinta iyo soo kabashada la dhammeeyo.
Xoghayaha Difaaca Filibiin Delfin Lorenzana ayaa maanta ku dhawaaqay in tirada dadka ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay koonfurta Filibiin ay kor u dhaafeyso 52 iyadoo labo kale oo dhaawac halis ah ka badbaaday shilkii ay ku dhinteen isbitaalka.
Dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda C-96H ee burburay markii ay caga dhigatay ka hor duhurkii Axadda jasiiradda Jolo ee gobolka Sulu waa la helay, waaxda difaaca qaranku waxay sheegtay in 130 askari ay dhinteen 49 kalena ay dhaawacmeen.
Lorenzana ayaa sheegtay in seddex qof oo rayid ah oo goobta ku sugnaa ay sidoo kale dhinteen afar kalena ay dhaawacmeen.
Lorenzana waxay mar hore amartay "baaritaan buuxa" shilka "sida ugu dhakhsaha badan marka hawlgalka samatabbixinta iyo soo kabashada la dhammeeyo."
Major General Edgard Arevalo, oo ah afhayeenka ciidamada Filibiin, ayaa shir jaraa'id oo khadka tooska ah ku sheegay in howlaha dib u soo celinta qeybaha diyaaradaha, oo ay ku jiraan sanduuqa madow ee duubay xogta duulimaadka, ay ka socdaan goobta ay diyaaraddu ku dhacday, isla markaana koox baarayaal ah ay yimaadeen. Sulu.
Daqiiqado ka dib markii uu shilku dhacay, ciidamada iyo mutadawiciin rayid ah ayaa ku soo yaacay goobta si ay u baaraan oo u soo badbaadiyaan "Goobjoogayaal, tiro askar ah ayaa la arkay iyaga oo ka boodaya diyaaradda ka hor inta aysan dhulka ku dhicin, iyaga oo ka reebay qaraxa uu sababay shilka," ayuu yiri militariga.
Arevalo wuxuu sheegay in shilka diyaaradeed ee C-130H uu ka mid yahay "dhacdooyinkii ugu naxdinta badnaa" ee ka dhaca ciidamada qalabka sida.